करको अनि रहरको मेहेनतको असाधारण नतिजा - Blogs of Sagar Prasai
करको अनि रहरको मेहेनतको असाधारण नतिजा
Prof. Dr. Kaluram Khambu Rai
"कहाँबाट आको रैछ फोन?"- होल्डमा राखिएको फोनमा परबाट आवाज आयो। मैले त्यति सुन्दै थाहा पाएँ, यो वहाँकै आवाज हो।
"काठमाडौँ बाट रे"- एकजना महिला फोन नजिकैबाट बोलिन।
एकछिन कोहि बोलेन। सायद वहाँ बिस्तारै फोन भएको ठाउँमा आउदै हुनुहुन्थ्यो।
"हेलो!"- ठुलो स्वरमा वहाँले बोल्नुभयो तर यो वहाँको "नर्मल" बोली नै हो।
"नमस्कार सर।" – मैले भने।
"हजुर नमस्कार। को बोल्नुभयो होला?"
"सर म सागर प्रसाईँ। सम्झनुहुन्छ?"
वहाँ एकछिन बोल्नुभएन।
एकछिन सम्झिए पछि एकदमै उत्साहका साथ भन्नुभयो-"ओहो, मेरो गुरू पो बोल्नुभयो!"
मेची बहुमुखी क्याम्पस भद्रपुर, जिवविज्ञान (जुलोजी) विभागका प्राध्यापक डाक्टर कालुराम खम्बु राईले यसो भन्दा म प्रफुल्ल भएँ। खुशीले हल्का मुस्कुराए र झन्डै चार बर्ष अगाडीको सम्झनामा पुगेँ।
त्यतिबेला म अपाङ्गता सम्बन्धी काम गर्ने एउटा संस्थामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई कम्प्युटर पढाउँने काम गर्थेँ। त्यहाँ शारीरिक अपाङ्गता भएका तथा दृष्टिबिहिन व्यक्तिहरू कम्पयुटर सिक्न आउँथे। यस्तैमा एकदिन मैले चिनेका एक मित्रले फोन गरेर भन्नुभयो-"एकजना भर्खरै दृष्टि गुमाउनुभएका व्यक्तिलाई भेटेको छु। एकदमै विचलित हुनुहुन्छ, अब म बर्बाद भए, नदेखे पछि मेरो जिवन सकियो भनेर आलाप गर्दै हुनुहुन्छ, मैले तपाईको नम्बर दिएर पठाएको छु। त्यहाँ आउनुहुन्छ होला- के गर्न सकिन्छ हेरौँ त।"
त्यसको भोलिपल्ट बिहानै ती मित्रले भन्नुभएका व्यक्तिले फोन गर्नुभयो र हाम्रो कार्यालयमा आउने वाटो सोध्नुभयो। मैले वहाँकी श्रिमतिलाई बाटो बताईदिए। दिउँसो तिर वहाँहरू हाम्रो कार्यालयमा आईपुग्नुभयो। मैले ती व्यक्तिसँग मजाले कुरा गरेँ। वहाँको नाम रहेछ- कालुराम खम्बु राई (के.आर. खम्बु)। उमेरमा म भन्दा धेरै पाका वहाँ मेची क्याम्पसमा प्राध्यापक हुनुहुँदो रहेछ। जिवविज्ञानमा पिएच्‌डी गर्नुभएको रहेछ। र भर्खरै दृष्टि पुरै गुमेपछि पुरै आँतालिनु भएको रहेछ।
"आँखाले नदेखे पछि, मैले के चाहि गर्न सक्छु र?" उदास भएर वहाँले भन्नुभयो। "अब अरूलाई पढाउनको त के कुरा आफै बाथरुम पनि जान सक्दिन"।
वहाँमा चरम उदासी थियो र त्यो स्वाभाविक पनि थियो। वहाँलाई यस अवस्थाबाट फिर्ता ल्याउनु हाम्रो लागी चुनौति भएर उभियो। त्यसकालागी आफ्ना विषयका विज्ञ ती व्यक्तिलाई –"दृष्टि गुमेपनि केहि छैन, तपाईले आफ्नो काम पहिला जस्तै गर्न सक्नुहुन्छ" भनेर विश्वास दिलाउनु पर्ने थियो।
त्यो बेला मसँग सुशील अधिकारी पनि त्यहाँ काम गर्थे। सुशील आफु पनि दृष्टिबिहिन व्यक्ति हुन्। मैले र सुशीलले ती सरलाई दृष्टिबिहिनले चलाउने सफ्टवेयर प्रयोग गरेर कम्प्युटर चलाउन सिकायौँ। सुशीलले सेतो छडी टेकेर आफै हिडडुल गर्न सिकाए। वहाँलाई हामीले अन्य धेरै दृष्टिबिहिन व्यक्तिहरूसँग भेटायौ जसले गर्दा वहाँमा एउटा नया साहश आयो। र यसरी एक हप्ता हामीसँग बिताएपछि सर आफ्नो घर र कार्यक्षेत्र फर्कनुभयो।
वहाँ घर फर्केपनि मैले वहाँलाई फोन गरिरहे। वहाँले आफैले कम्प्युटर चलाएर मलाई ईमेल गर्नुहुन्थ्यो र म वहाँलाई विश्वप्रसिद्ध प्रेरणादायी किताबहरू माईक्रोसफ्ट वर्ड भर्सनमा पठाईदिन्थे ताकीले वहाँले त्यो कम्प्युटरमा राखेर पढ्न सक्नुहोस्। र वहाँले बिस्तारै ती किताब मजासँग पढेर तिनको समिक्षा गर्नुहुन्थ्यो।
यस्तैमा २०१३को अगस्टमा म ४ महिनाको लागी अमेरिका गएँ। त्यो बेला वहाँसँगको कुराकानीको सिलसिला टुट्यो। म फर्किए पछि पनि खै किन हो खम्बु सर सँग कुरै भएन। यतिकै यतिकै २ बर्ष बित्यो। कहिलेकाँहि वहाँलाई सम्झन्थे, फेरी त्यतिकै बिर्सन्थे।
अस्तिको दिन चाहि मोबाईल चलाउँदै गर्दा वहाँको घरको नम्बर आयो र मैले कल गरे। निकै बेर कुरा गरेपछि मैले सोधे-"कम्प्युटरको चाहि के छ खबर, कतिको जान्नुभयो।"
"सर, मैले त धेरै जाने हौ कम्प्युटर। कति सम्म भने मैले त नेपालीमै एउटा किताब नै पो लेखे त। अहिले भाषा सम्पादन गर्न एक मित्रलाई देखे छु।"
वहाँको कुराले म एकदमै खुसी भए र सोधे-"कस्तो किताब हौ सर?"
"तपाईलाई के लुकाउनु, आत्मकथा लेखेको। सबै साथीले पनि भने। दृष्टिगुमे पछि झन्डै बिचलित भईसकेको मलाई पनि आफ्नो कथा सबैलाई भन्न मन लाग्यो। तपाईलाई पठाउछु नि।"
वहाँको यो कुराले मलाई अर्कै खालको खुशी भयो। आखामा आँशुका थोपा जमाउने खालको खुशी। वहाँसँग फोनमा बिदा भएपछि पनि मैले वहाँलाई सम्झिरहेँ।
मैले सुनेको थिए- कि त मान्छेले रहर लागेर मेहेनत गर्छ कि कर लागेर। तर यदि कर लागेर गर्नै पर्ने मेहेनतमा रहरको मेहेनत पनि जोड्यो भने असाधारण नतिजा निस्कने रहेछ। यस्तै एउटा नतिजा हुन्- मेरा अहिले सम्मका सबभन्दा क्षमतावान शिष्य- प्रा.डा. कालुराम खम्बु राई।